देउवाको सय दिनमा तीन महिना षड्यन्त्रमा बित्यो : डा. सुन्दरमणि दिक्षित « News24 : Premium News Channel
देउवाको सय दिनमा तीन महिना षड्यन्त्रमा बित्यो : डा. सुन्दरमणि दिक्षित
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले नेपालका सबै दलका नेताहरु फेल भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेताहरु असफल भएकै कारण आज आम मानिसले राजा आउ भन्ने नारा लगाउन थालेको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सय दिन पुगेको अवसरमा आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रममा बोल्दै डा. दिक्षितले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अहिले राजा आउ भन्ने नारा लाग्न थालेको छ, यसबाट के बुझिन्छ के भने सबै नेता फेल भएको पक्का भयो । आजको दिनमा राजा आउ भन्ने नारा झन झनै बढ्दो छ। शेरबहादुर देउवाको सय दिनमा तीन महिना त षड्यन्त्रमा गयो । देउवाले आफ्नो समय षड्यन्त्रमा बिताउनुभयो । माधव नेपाललाई एमालेबाट फुटाउनुभयो । उहाँ त सति जानुभयो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । माधव नेपाल खेमा फुटाउनेबित्तिकै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो । यो कस्तो षड्यन्त्र हो ? यसले मुलुकको लोकतन्त्र कमजोर पार्यो ।’
उनले देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा असक्षम नेताको उपाधि पाएको पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘अब कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा पनि कसरी सभापति बन्ने भनेर उहाँले तयारी गरिरहनुभएको छ । कांग्रेसमा सक्षम सांसद छन् । तर, उहाँले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुभयो । उहाँ किनबेचमा माहिर हुनुहुन्छ । सरकारको कामको के कुरा गर्नु ? तुँईन काण्डमा नेपाल सरकारले भारतसँग एक शब्द पनि बोल्न सकेन । एउटा टिम पठाएर आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरियो, उमेश श्रेष्ठले राम्रो काम गर्नुभएको थियो । तर, तत्काल उहाँलाई त्यो जिम्मेवारीबाट सार्नुभयो । जताबाट हेरेपनि षड्यन्त्रै षड्यन्त्रमा तीन महिना बित्यो ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशबाट शासन गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अध्यादेशबाट शासन चलाएपछि लोकतन्त्र नै कच्चा भयो । यो सिष्टम नै काम लागेन । नेताहरु काम लागेनन् । किन देशमा प्रगति भएन ? भ्याक्सिनमा एउटा राम्रो काम भएको थियो ।’ उनले पाँच दलीय गठबन्धन नै असफल भएको दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद अवरुद्ध गरिरहेको तर सदन सुचारु गराउनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल नगरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘संसद् सुचारु गर्नुपर्छ । सरकार निकम्मा भयो, हुँदाहुँदै अब संसद् पनि निकम्मा भयो । यो सबै स्वार्थको कारण हो ।’